Pyae Phyo (MMiTD): January 2015
ရောမခေတ်ကတိုက်ပွဲကြီး I, Gladiator v1.10.0.21621 (MOD APK+DATA ) (Unlimited Money)
ဒီနေ့ တော့ ဦးလေးကြီး တင်ပေးမှာကတော့ ဓါးခုတ်ဂိမ်းလေးဖြစ်တဲ့ အပြင်
ရောမခေတ်ကိုပါ ပြန်ရောက်သွားနိုင်တဲ့ဂိမ်းလေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်
ဒီဂိမ်းလေးကတော့ ဇာတ်လမ်းရှည်ဂိမ်းလေးပါ ဇာတ်လမ်းသွားဆော့ကစားရတဲ့ 
ဂိမ်းလေးပါ ပြီးတော့ ရုပ်ထွက်ကြည်လင်းပြတ်သားမှု
ဇာတ်ရုပ်ကလည်း ထူဆန်းတဲ့ အကောင်းကြီးများနဲ့ တိုက်ရိုက်ရတဲ့ အပြင်
ရောမစစ်တည်တပ်သားများနဲ့တိုက်ရိုက်ရမယ့်ဂိမ်းဖြစ်တဲ့ အတွက်ကြောင့်
ဦးလေးကြီးရဲ့ မိတ်ဆွေများ ကြိုက်နှစ်သက်လိမ့်မယ်လို ယူဆပါတယ်
ယခုဂိမ်းလေးက APK+DATAလေးပါ --Part 1 နဲ့ Part 2ပေးထားပါတယ်
ကြိုက်တဲ့ Partကနေတခုပဲဒေါင်းယူပေးပါ APK+DATA ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်
ပြီးပါက ရလာတဲ့ DATA ZIPကိုအရင်ဖြည်ပါ ဖိုင်းအဖြစ်ကူးပြောင်းသွားပါက
INTERNAL CARDထဲကိုသွားပါ Androidဖိုင်းကိုရှာပြီးဝင်လိုက်ပါ
OBBဖိုင်းထဲသို့ မိမိတို့ ရရှိလာတဲ့DATAကိုထည့်ပေးလိုက်ပါ
Free Downloads link I, Gladiator v1.10.0.21621 (MOD APK+DATA ) (Unlimited Money)
I,GLADIATOR APK+DATA PART1
I,GLADIATOR APK+DATA PART2
Posted by ဦးအာကာ -ဦးလေးကြီး 1 comment :
Acoustica Premium Edition 6.0 Build 17 +Reg +100% working
မင်္ဂလာပှါဗျာသူငယ်ချင်းများအတွက် Software ကောင်းလေးတစ်ခုကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
Software လေးကတော့အားလုံးအသိထင်ပါတယ်နော်။ဒီ Software လေးကတော့အမည်လိုက်
အောင် သီသံတွေကိုမိမိလိုသလိုပြူပြင်လို့ရတဲ့ Software လေးပါပြီးတော့ DVD Cover တွေအ
တွက် Toolbars လေးပါလာပါတယ်။လိုချင်တဲ့သူငယ်ချင်းများယူလို့ရပါတယ်။ Crack လုပ်နည်း
လေးကိုတော့အောက်မှာ Video လေးနဲ့ပြထားပါတယ်။လေ့လာချင်တဲ့သူငယ်ချင်းများအတွက်
ကျွန်တော် Acoustica Premium Edition ကို Rakhine IT Group Training ဆိုတဲ့ဆိုးဒ်လေး
Win RAR Extract Here
Save Folder Software
Install Software EXE Serial and Key Key Gen and Crack
Download Acoustica Premium Edition 6.0 Build 17 Crack only
Download Acoustica Premium Edition 6.0 Build 17 Full Version
Editor ကောင်းကောင်းအသုံးပြုချင်းပါသလား HDR FX Photo Editor Pro v1.6.2 Apk
ဒီနေ့ တော့ ဦးလေးကြီးတင်ပေးမှာကတော့ ဓာတ်ပုံပြုပြင်ရာတွင်း
အစွမ်းထက်တဲ့ apkလေးဝေမျှပေးမှာဖြစ်ပါတယ် ပြီးတော့ ဒီapkလေးကို
ဦးလေးကြီးတင်ဖူးပါတယ် ဗာရှင်းအသစ်လေးမှာ ထက်မံဖြည့်သွင်းထားတဲ့ 
စုံလင်းတဲ့ Editorတွေပါဝင်လာတာကြောင့် ထက်တင်ပေးလိုက်တာပါ
ပြုပြင်စရာများ ထက်မံဖြည်သွင်းပေးထားတာကတော့ ၁၇မျိုး အသစ်ထက်ဖြည်သွင်းပေးထားပါတယ်
effectsသက်ရောက်မှုများကိုလည့်း Editorကောင်းမွန်းအောင်ထက်မံ overlayတင်ဆင်ပေးထာပါတယ်
ဓာတ်ပုံများကို Black (အနက်ရောင်) and white (အဖြူရောင်)ဖြင့် ပန်းချီကားတဖွယ်ပြုပြင်ချင်းပါသလား
ဒါမှမဟုတ် နေ၀င်ဆည်းဆာအလှအဖြစ် ဖန်တီးချင်းပါသလား ဒါမှမဟုတ်
Putမှတ်ကျောက်ပုံစံဖြင့် မိမိပုံများကို framesဘောင်များဖြင့်border နယ်နိမိတ်ဖြင့် ဖန်စားနိုင်ပါတယ်
မိမိပုံများကို dramatic ပြဇာတ်တဖွယ် textures စာမျက်နှာပြင်ပေါ်သို့စာတန်းထိုးနိုင်ပါသေးတယ်
သင့်ရုပ်ချောတဲ့ လူတယောက်ဆိုပါဆို ခုapkလေးအသုံးပြူုပြီး Straighte ပိုပြီးဖြောင့်အောင် သင့်ရုပ်ရည်ကို
ကိုယ်ကိုတိုင်း ဖန်ဆင်းလိုရပါသေးတယ်-ပြီးတော့ ဓာတ်ပုံတစ်ပုံရိုက်ရာတွင်းလည်း သင့်ဘယ်လောက်ပဲ
လှုပ်ခါနေပါစေ ဒီapkလေးက သင့်ကို ငြိမ်နေတဲ့ ပုံအဖြစ် ဖန်တှီးပေးတယ်နော်
ဦးလေးကြီးရှင်းပြထားတဲ့အရာက အစမ်းအနေဖြင့် ပြောပြပေးထားတာပါ ဒီapkရဲ့ ပါဝင်ချက်တွေက အများကြီးပါပဲ ပြောပြရရင်ကုန်မှာမဟုတ်တော့လို မိမိတို့ ဒေါင်းယူပြီးမှကိုယ်တိုင်းစမ်းသပ်လိုက်ပါတော့
Editor ကောင်းကောင်းအသုံးပြုချင်းသူများ အောက်မှာ ဒေါင်းယူသွားလိုက်ပါ
Free Downloads Link HDR FX Photo Editor Pro v1.6.2 Apk
လက်ရှိHotနေတဲ့ssLauncher the Original v1.14.15 Apk
ဒီနေ့ တော့ ဦးးလေးကြီးတင်ပေးမယ့် apkလေးကတော့
လက်ရှိမှာHotဖြစ်နေတဲ့ssLauncher လေးပါ လန်းလန်းလေး
အသုံးပြုချင်းသူများအတွက်တော့ အမိုက်ပဲဗျာ ဘာလိုလဲဆိုတော့
စာမျက်နှာများ အကူးအပြောင်းလုပ်ရန်အတွက် လက်ဖြင့်ထိလိုက်တာနဲ့ 
(additional page transition animations)သွက်လက်မှုမှာ မြန်ဆန်စွာအသုံးပြုနိုင်သည်အပြင်
တခြားapkများကို နောက်ထက် ထက်မံရယူပြီး အသုံးပြုလိုရပါသေးတယ်
ပြီးတော့ (planned)အစိအစဉ်ရေးဆွဲရာတွင်းလည်း applicationများကို folderပုံစံဖြင့်လည်းကောင်း
drawer အံဆွဲ ပုံစံဖြင့်လည်းကောင်း ပုံစံအမျိုးဖြင့် support ထောက်ပံပေးထားပါတယ်
ပြောရရင်ကုန်တော့မှာမဟုတ်ဘူးဗျာ လိုအပ်တဲ့ လူများ အောက်မှာဒေါင်းယူပြီး စမ်းသပ်လိုက်ပါတော့
Free Downloads Link ssLauncher the Original v1.14.15 Apk
Android Phone ကိုအခုမှစသုံးမှာလား??
Android Operating System (AOS)ဖုန်းများကို အခုမှစသုံးကြမယ့်​​ဘော်​ဒါ​တွေအတွက်​
Manual For Android ဆိုတဲ့စာအုပ်​​ကောင်း​လေးတစ်​အုပ်​ကိုတင်​​ပေးလိုက်​ပါတယ်​ ။
Android User တစ်​​ယောက်​က AOS System ​
အ​ကြောင်းကိုအ​သေးစိတ်​သိထားမှ ဖုန်းတစ်​လုံးကိုအကျိုးရှိ့ရှိ့ အသုံးချနိုင်​မှာဖြစ်​ပါတယ်​ ။ ကျ​နော်​တင်​​ပေးလိုက်​တဲ့စာအုပ်​​လေးက ဖုန်းအခုမှစသုံးမယ့်​သူ​တွေအတွက်​ တစ်​​ထောင့်​တ​နေရာက​နေ အကူအညီ​ပေးနိုင်​လိ်​မ့်​မယ်​လို့ထင်​ပါတယ် ​
​အောက်​က Click Here To Download စာသားကို
Click ပီး Down ပါ
-- ​​CLICK HERE TO DOWNLOAD --
Posted by Ko Nay Zin (zal mobile) No comments :
အမျိုးအစား: Android ဖုန်းအသုံးပြု့နည်း
♪ ESET Smart Security 8 [32bit & 64bit] + Full Activator & (Username , Password) ♫
Antivirus တွေထဲမှာ နာမည်ကြီးတဲ့ ESET Smart Security 8 နောက်ဆုံးထွက် Version ကိုတင်ပေးလိုက် ပါတယ်ဗျာ။ အရင်တစ်ခေါက်တင်ပေးလိုက်တုန်းက Crack နဲ့သိပ်အဆင်မပြေသူတွေအတွက် အခုတစ်ခါ မှာတော့ Activator ကိုတင်ပေးထားပါတယ်ဗျာ။ Activator အသုံးပြုပုံကိုလည်းအောက်မှာ ပုံနဲ့တကွသေ ချာလေးရှင်းပြပေးထားပါတယ်ဗျာ။ ESET NOD32 ကတော့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့အသုံးပြုလို့ကောင်းပါတယ်။ Virus , Spyware , Malware , Trojan နဲ့ အခြားသော Virus ပေါင်းများစွာကို နိုင်နိုင်နင်းနင်း သတ်နိုင်ပါတယ်။ မိမိရဲ့ ကွန်ပြူတာနဲ့ Data တွေကိုလည်း လုံခြုံမှုရှိအောင်ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်ဗျာ။ Browser များမှ တဆင့် ၀င်ရောက်နိုင်တဲ့ Malware အစရှိတဲ့ Virus များရဲ့ရန်မှလည်း Protect လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်ဗျာ။ Anti-Phishing ဆိုတဲ့ Feature တစ်ခုလည်း Internet အသုံးပြုသူတွေအတွက် လုံခြုံစိတ်ချမှုရှိစေပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Network & Internet Security အနေနဲ့ Firewall စနစ်တစ်ခုက အရင် Version တွေထက် Feature တွေပိုစုံလင်လာပါတယ်။ License အနေနဲ့ User Name နဲ့ Password ကိုပါတစ်ခါတည်း ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ ဒါ့အပြင် Crack File ကိုပါ Install လုပ်ဖို့ ထည့်ပေးထားပါတယ်။ Crack အသုံးပြုပုံကိုလည်းအောက်မှာ ရှင်းပြထားပါတယ်ဗျာ။ 32bit & 64bit နှစ်မျိုး လုံးသုံးနိုင်အောင်တင်ပေး ထားပါတယ်ဗျာ။ အသေးစိတ်လေ့လာချင်တယ် ဆိုရင်တော့အောက်မှာ ဆက်လက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်ဗျာ။
အမျိုးအစား: Antivirus , Antivirus Softwares
♪ အခြားသူများမမြင်စေချင်တာများကို Lock ချပေးနိုင်တဲ့ - Smart App Lock Premium v6.5.4 Apk (29-Jan) ♫
Android Phone မှာ အခြားသူတွေမမြင်တွေ့စေချင်တဲ့ အရာတွေ မသုံးစေချင်တဲ့ အရာတွေကို Lock ချ
ပေးနိုင်တဲ့ Software လေးတစ်ခုမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ ကျွန်တော့်လိုမျိုး လျှို့ဝှက်ချက်တဲ့များတဲ့သူငယ် ချင်းများသဘောကျမယ့် Application လေးဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ အခုအသစ်ထွက်လာတဲ့ Version မှာတော့ Fake ဆိုတဲ့ Feature လေးထပ်ပါလာပါတယ်။ တော်တော်လေးမိုက်တယ်တယ်ဗျ မိမိမဖွင့်စေချင်တဲ့ App: ကိုသာ Fake လုပ်ထားမယ်ဆိုရင် အဲဒီ Application ကိုဖွင့်လိုက်တာနဲ့ Unfortunately, Phone has Stopped ဆိုပြီး Error တက်တဲ့ပုံစံမျိုးတက်လာပါလိမ့်မယ်။ ဒါဆိုရင် Lock ချထားရင်ချထားမှန်းမသိတော့ ဘူးပေါ့ဗျာ။ Pattern နဲ့ရော Pin Code နဲ့ပါ နှစ်မျိုး Lock ချနိုင်ပါတယ်။ အသေးစိတ်ကိုတော့အောက် မှာလေ့လာနိုင်ပါတယ်ဗျာ။ Android OS 2.3 နှင့်အထက်ဖုန်းများမှာအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။
Live Wallpaper Maker.Apk
ကိုယ်ပိုင် Wallpaper ပြုလုပ်ချင်တဲ့မိတ်ဆွေအတွက်ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ ကိုယ်ပြုလုပ်ချင်တဲ့ ဓာတ်ပုံပေါ်မှာ စာတန်လေးပြေးနေအောင်ပြုလုပ်လို့ရခြင်း| Wallpaperထဲမှာ Effect တို့ပြုလုပ်လိုရခြင်း| Videos တွေကို Wallpaper အဖြစ်ပြုလုပ်လို့ရခြင်း | အစရှိသဖြင့်မိတ်ဆွေတို့ ကြိုက်သလိုပြုပြင်ပြောင်းလဲအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဗျာ ကိုယ်ပိုင်Wallpaper လေးပြုလုပ်ချင်တဲ့မိတ်ဆွေများ အောက်ကလင့်မှာဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်ဗျာ
အဆင့် ၁ အောက်မှာ >>>DOWNLOAD HERE<<< ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်ပါ။
အဆင့် ၂ မှာ5seconds လောက်စောင့် ပေးပါ။
အဆင့် ၃ >>>SKIP AD <<< နှိပ်ပေးပါ။
Khoon Phyo Naing
Posted by Khoon Phyo Naing No comments :
အမျိုးအစား: Android apk
Location: Ram Inthra, Khan Na Yao, Thailand
♪ QuickDraw ကံစမ်းမဲ Application အသုံးပြု၍ iPhone 5s ကံစမ်း ရယူနိုင် ♫
QuickDraw အမည်ရှိ ကံစမ်းမဲ Appplication ကို အသုံးပြု၍ iPhone 5s ၊ ကမ်းခြေအပန်းဖြေ ခရီးသွားလက်မှတ်နှင့် ဂျပန်အမှတ်တံဆိပ် အလှကုန်ပစ္စည်းများ ကံစမ်းရယူနိုင် မည်ဖြစ်ကြောင်း ဆော့ဖ်ဝဲ လုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးရေး ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည့် Acroquest Myanmar Technology Co., Ltd. မှ သိရသည်။
"ဆုရရှိသူကို ကျွန်တော်တို့ ဆုရရှိမှုအတွက် ဂုဏ်ပြုကြောင်း message နဲ့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်ကို ပို့ပေးပါတယ်။ မဲပေါက်တဲ့သူက ကျွန်တော်တို့ဆီကို ဖုန်းနဲ့ ဆက်သွယ်လိုက်ရုံပါပဲ။ တကယ်လို့ မဆက်သွယ် ခဲ့ရင်တော့ ဆုအတွက် အခြားတစ်ယောက်ကို ရွေးချယ်သွားမှာပါ။ QuickDraw ကို အသုံးပြုပြီး ဆုတွေကို ရယူကြဖို့ ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်" ဟု Acro-quest Myanmar Techno-logy Co., Ltd. မှ တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးက ပြောသည်။
QuickDraw App ကို မိမိတို့၏ Facebook အကောင့်ဖြင့် အလွယ်တကူ Log in ဝင်ရောက် အသုံးပြုရမည်ဖြစ်ပြီး Facebook တွင် Check-in ပြုလုပ်သကဲ့သို့ မိမိရောက်ရှိသည့် နေရာတိုင်းတွင် Check-in ပြုလုပ်၍ ပွိုင့်များရရှိအောင် ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်သည်။ တစ်နေရာမှ တစ်နေရာသို့ မိမိ သွားရောက်သည့် အကွာအဝေးပေါ် မူတည်၍ ပွိုင့်များရရှိမည်ဖြစ်ပြီး ရရှိသည့်ပွိုင့်ဖြင့် မိမိကံစမ်းလိုသည့် ဆုအတွက် ကံ စမ်းမဲလက်မှတ်များ ဝယ်ယူကာ ကံစမ်းရမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
၎င်း App ကို Android OS စနစ်သုံး ဖုန်းများတွင်သာ အသုံးပြုနိုင်ဦးမည်ဖြစ်ပြီး iOS စနစ်သုံးအတွက် Application ကို မကြာမီ ဖြန့်ချိသွားမည်ဖြစ်သည်။ App ကို စမ်းသပ်သုံးစွဲလိုသူများနှင့် ဆုမဲ ကံစမ်းလို သူများအနေဖြင့် အောက်က Link မှာ Download ရယူနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
အမျိုးအစား: Android Application , Mobile သတင်းရေးရာအဖြာဖြာ
YouTube Downloader v4.4.1
ဖုန်းထဲကနေ YouTube က video တွေကို download ဆွဲယူနိုင်တဲ့ YouTube Downloader လေးဖြစ်ပါတယ်
file size 3MB သာရှိပြီး android 3.0 ကစပြီး အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်
အသုံးပြုရတာလွယ်လို့ အသုံးပြုနည်းကို မပြောပြတော့ပါဘူး
Easy to use Android App to download videos from YouTube.
*- Simply select the sharing button in the YouTube App while watchingavideo (or share any YouTube plain text link via any App) and choose "YouTube downloader".*
- You will be prompted with all the video codecs and qualities available for the video you're on.
- Fetching of file size before downloads now works
- Choose one and you will be prompted to download the video locally (on the phone)
YouTube Downloader v4.4.1 ကိုအောက်မှာ Free Download ရယူနိုင်ပါတယ်
ပိုစ့်အသစ်တင်တိုင်း Facebook ကနေ ယူချင်တယ်ဆိုရင် ဒီမှာLike နှိပ်ထားခဲ့လိုက်ပါ
အမျိုးအစား: Andriod applications , Android downloader , Media & Video
ကွန်ပျူတာအတွက် cleaner software တွေထဲမှာ နာမည်ကြီးတဲ့ CCleaner ကိုတော့ အားလုံးလည်းသိကြမှာပါ
ခုတင်ပေးလိုက်တာက android ဖုန်းတွေအတွက် CCleaner ဗားရှင်းအသစ်လေး ဖြစ်ပါတယ်
ဒီ cleaner လေးကတော့ ဖုန်းထဲက junk file တွေ cache တွေ clipboard history တွေ browser history တွေ Call Logs တွေ အစရှိတာတွေကို ရှင်းလင်းပေးမဲ့အပြင် ဖုန်းရဲ့လုပ်ဆောင်မှု speed ကိုလည်း မြင့်တင်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်
တစ်ခြားလုပ်ဆောင် ပေးနိုင်တာတွေလည်း ရှိပါသေးတယ်
file size 2.3MB သာရှိပြီး android 4.0 ကစပြီး အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်
Version : 1.07.30
CCleaner v1.07.30 ကိုအောက်မှာ Free Download ရယူနိုင်ပါတယ်
အမျိုးအစား: Andriod applications , Android booster , Android cleaner , Tools
မဲံနေတဲ့ လူတယောက်ကို ဖြူလာအောင်ပြုလုပ်ပေးနိုင်တဲ့ Perfectly Clear v4.0.1 Apk
ဒီနေ့ တော့ ဦးလေးကြီးတင်ပြပေးမှာကတော့ ယောင်္ကျာလေးကော-မီန်းကလေးပါကြိုက်နေသက်စေမယ့်
Perfectly Clear apkလေးပါ ဒီapkလေးရဲ့ ထူ့ခြားကတော့ အသားမဲနေတဲ့ လူတယောက်ကိုတောင်း
အသားဖြူလာအောင် ပြုပြင်ဖန်တီးလိုရတဲ့ apkလေးပါ ပြောရရင် ဒီapkလေးထုတ်လုပ်သူကတောင်း
တခြားနာမည်ပေးထားပါတယ် မှော်ပညာတဲ့ဟုတ်ပါတယ် ပေးလဲပေးထိုက်ပါတယ်
ဒီကောင်းလေးရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေကကောင်းလွန်းလိုပါ Google playမှာဆို $.99နဲ့ တောင်းရောင်းချပေးထားတဲ့ apkလေးပါ ဦးလေးကြီးမိတ်ဆွေများအတွက်တော့
ကဲဒီကောင်းလေးရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်များကတော့ မိမိကိုယ်တိုင်းတိုင်း ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီး
ဓာတ်ပုံပြုပြင်မလား ဒါမှမဟုတ် မိမိမှာရှိပြီးသားဓာတ်ပုံများကို ပြန်လှန်ပြုပြင်မလား
ကာလာဖြင့် မိမိရဲ့ ဓာတ်ပုံများကို မှော်ဆန်းအောင် အရောင် မျိူးစုံနဲ့ ပြုလုပ်မလား
မိမိပုံရိုက်ရာတွင်း မဲနေတဲ့ နေရာများရှိနေပါက ဒီကောင်းရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်များဖြင့်ပြုပြင်မလား
မိမိတို့ ဒေါင်းယူပြီးမှ ကိုယ်တိုင်းစမ်းသပ်လိုက်ပါတော့
Free Downloads Link Perfectly Clear v4.0.1 Apk
ကွန်ပျူတာသမားတိုင်းအတွက် အသုံးဝင်တဲ့ Deep Freeze software လေး
ဒီတစ်ခါ ကျနော် တင်ပေးချင်တာလေးကတော့ ကွန်ပျူတာသမားတွေအတွက် အသုံးဝင်စေမယ့် နည်းလမ်းလေးတစ်ခုကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်
ကွန်ပျူတာသမားအားလုံးအတွက်တော့မဟုတ်ပါဘူး သင်တန်းဖွင့်ထားတဲ့သူတွေ ပြီးတော့ သူ့ရဲ့ အသုံးဝင်ပုံတွေကို ကြည့်ပြီး
ကိုယ့်အတွက် အသုံးဝင်မယ်ဆိုရင်တော့ ကျနော် ကျေနပ်ပါတယ်...Deep Freeze ကို အသုံးပြုပြီး ကွန်ပျူတာက data တွေကို မပျောက်ပျက်အောင်
Deep Freeze က စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်။ သူအလုပ်လုပ်ပုံက ၀င်းဒိုးစ်ရဲ့ System Restore နဲ့ဆင်တူပါတယ်။ ပိုပြီး ပါဝါမြင့်ပါတယ်။
Deep Freeze က System File တွေကိုသာမက Data File တွေကိုပါ Restore လုပ်ပါတယ်။
Deep Freeze က ၀င်းဒိုးစ် ရီစတတ်လုပ်ပြီးတိုင်းမှာ ဖိုင်တွေအားလုံးကို မူလအခြေအနေပြန်ရောက်သွားစေပါတယ်။ ဆိုလိုတာက
စက်တလုံးမှာရှိနေတဲ့ ဆော့ဝဲအချို့ကိုဖျက်ပစ်မယ် ... ဖိုင်အချို့ကိုဖျက်ပစ်မယ် ... အဲဒီဖိုင်တွေ ဆော့ဝဲတွေဟာ ၀င်းဒိုးစ်ပြန်ဖွင့်တဲ့အခါ
ဖိုင်အဟောင်းဖျက်ပစ်တာတွေ ပြန်ပေါ်လာသလို ဖိုင်အသစ် ထပ်ပြီးသိမ်းထားတာမျိုးကိုလည်း ခွင့်မပြုပါဘူး။ အသစ်ထပ် ထည့်ထားတဲ့
ဖိုင်တွေအားလုံး ရီစတတ်လုပ်အပြီးမှာ ပျောက်သွားပါလိမ့်မယ်။ အသစ်ဝင်ရောက်လာတဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်တို့အပါ အ၀င်ပေါ့လေ။
ဆိုတော့ကာ ဒီဆော့ဝဲကိုသုံးမယ်ဆိုရင် စက်ထဲရှိနေပြီးသားဖိုင်တွေကို ဖျက်ပစ်တာတွေ၊ ပြင်ဆင်တာတွေ လုပ်လို့မရပါ။ ဖိုင်အသစ်တွေ
ထပ်ထည့်တာမျိုးလုပ်ခွင့်မရှိပါ။ တကယ်လို့များ ဖိုင်အသစ်တခု ကိုယ်လိုအပ်တယ်ဆိုရင်တော့ ယူအက်စ်ဘီ ဒရိုက်နဲ့ ကူးယူထားမှ
ရွေးချယ်ခွင့်တခုတော့ရှိပါတယ်။ မိတ်ဆွေရဲ့စက်မှာ Drive C, Drive D စသဖြင့် ခွဲထားတယ်ဆိုရင် ၀င်းဒိုးစ်နဲ့ ဒရိုင်ဗာတွေ ရှိတဲ့ Drive C
ကိုဘဲ ထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပါတယ်။ အဲလိုဆို C ကလွဲလို့ အခြားဒရိုက်တွေမှာကတော့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲခွင့်တွေ ရပါလိမ့်မယ်။
ကျနော်ကတော့ ဒီဆော့ဝဲကို ကျနော့်ကွန်ပြူတာသင်တန်းခန်း၊ အင်တာနက်ခန်းမှာသုံးပါတယ်။ အင်တာနက်ခန်းမှာရှိတဲ့ ကွန်ပြူတာတွေက
တနေကုန် အင်တာနက်တက်တယ်။ အီးမေးလ်တွေသုံးနေတယ်ဆိုတော့ကာ မလိုအပ်တဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်တို့ လိုမျိုးတွေလည်း ၀င်ရောက်လာတတ်ပါတယ်။
အဲဒါတွေကို ခဏခဏပြန်ပြန်ရှင်းနေရတာ အလုပ်တခုဖြစ်နေပြီး အချိန်သိပ်ကုန်ပါတယ်။ အခု Deep Freeze
ကို စက်တိုင်းမှာ ထည့်ထားတော့ အိုကေဘဲ။ ဘာမှလုပ်စရာမလိုတော့ဘူး။ တခုခုဖြစ်ရင် (ဗိုင်းရပ်စ်တို့လို ၀င်ရောက်တိုက်ခိုက်တာခံရရင်)
Deep Freeze က MB 30 ကျော်ဘဲရှိပါတယ်။ Deep Freeze ထည့်သွင်းရာမှာ
Program EXE ကိုဖွင့်လိုက်ပြီး တဆင့်တဆင့်ဆက်သွားလိုက်ရင် Deep Freeze Adminstrator install လုပ်ပါလိမ့်မယ်။
အင်စတောလုပ်တုန်းမှာ ပတ်စ်ဝါဒ်မေးတာရှိပါတယ်။ တခုခုထည့်ပေးပါ။ အဲဒါကို မှတ်ထားပါ။
Start > All Programs > Faronics > Deep Freeze Enterprise > Deep Freeze Administrator ကို ဖွင့်ပါ။
အချို့သူတွေအနေနဲ့ Deep Freeze ကိုသုံးရာမှာ Drive C တခုတည်းကိုသာ ထိန်းချုပ်ထားချင်တယ်ဆိုရင်လည်း အဆင်ပြေပါတယ်။
အဲလို Drive C ကိုဘဲ ထိန်းချုပ်ထားမယ်ဆိုရင် အခြား Drive တွေမှာ ဖိုင်တွေသိမ်းတာတွေ၊ ဖျက်တာတွေ၊ ပြုပြင်ပြောင်းလဲတာမျိုးတွေ
မြားပြထားတဲ့ နေရာက Driver ကိဖွင့်ပါ။
အောက်က check box တွေမှာ C ကလွဲလို့ ကျန်တာအားလုံးကို uncheck လုပ်လိုက်ရင် အိုကေသွားပါမယ်။
မြားပြထားတဲ့ ၀က်ဝံပုံကို ကလစ်ပါ။ (Workstation create လုပ်ပါမယ်။)
C > Program Files > Faronics > Deep Freeze6Enterprise > Install Programs ဖိုလ်ဒါရောက်အောင် အဆင့်ဆင့်
နောက်ဆုံးမှာ စက်က သူ့ဘာသာသူ restart လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ စက်ပြန်ပွင့်လာပြီးရင်တော့ မိတ်ဆွေရဲ့စက်မှာ DF အလုပ်
Start bar ညာဘက်အောက်ဒေါင့်မှာ ၀က်ဝံပုံလေးပေါ်နေပါမယ်။
တခုခု အပြောင်းအလဲလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် Deep Freeze ကို ပိတ်ထားပေးရပါမယ်။ ဘယ်လိုပိတ်မလဲ ကြည့်ရအောင် ... ။
စက်ပြန်ပွင့်လာတဲ့အခါမှာ ၀က်ဝံပုံမှာ ကြက်ခြေခတ်ထားတာတွေ့ရပါမယ်။
password မေ့သွားရင် မြားပြထားတဲ့နေရာက နံပါတ်ကို မှတ်ထားပါ။ (အခုပုံမှာတော့ 0036A300 လို့ပြပါတယ်။ စက်တလုံးနဲ့တလုံး
Token နေရာမှာ စောစောက နံပါတ်ကိုထည့်။ Generate ကိုကလစ်။
၀ိုင်းပြထားတဲ့နေရာမှာ ပေါ်လာတဲ့နံပါတ်ကို သုံးပြီး Deep Feeze ကို Boot Thawed လုပ်ပေးနိုင်ပါပြီ။
Deep Freeze ကို Boot Thawed လုပ်ပေးပြီး ၀က်ဝံပုံမှာ ကြက်ခြေခတ်ဖြစ်နေမှ Deep Freeze ကို Uninstall လုပ်လို့ ရပါမယ်။ Boot
Thawed လုပ်ပြီးရင် အောက်ကအဆင့်တွေကို ဆက်လုပ်ပေးပါ။
နောက်ထပ်တွေကိုတော့ Uninstall, Next, Finish စသဖြင့် အဆင့်ဆင့် ဆက်သွားလိုက်ပါ။
နောက်ဆုံးမှာ စက်က သူ့ဘာသာသူ restart လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ စက်ပြန်ပွင့်လာပြီးရင်တော့ မိတ်ဆွေရဲ့စက်မှာ DF
Start bar ညာဘက်အောက်ဒေါင့်မှာ ၀က်ဝံပုံလေး ရှိတော့မှာ မဟုတ်ပါ။
Deep Freeze Standard : (10) MB
▼ January ( 672 )
ရောမခေတ်ကတိုက်ပွဲကြီး I, Gladiator v1.10.0.21621 (...
Acoustica Premium Edition 6.0 Build 17 +Reg +100% ...
Editor ကောင်းကောင်းအသုံးပြုချင်းပါသလား HDR FX Phot...
လက်ရှိHotနေတဲ့ssLauncher the Original v1.14.15 A...
♪ ESET Smart Security 8 [32bit & 64bit] + Full Act...
♪ အခြားသူများမမြင်စေချင်တာများကို Lock ချပေးနိုင်တ...
♪ QuickDraw ကံစမ်းမဲ Application အသုံးပြု၍ iPhone ...
မဲံနေတဲ့ လူတယောက်ကို ဖြူလာအောင်ပြုလုပ်ပေးနိုင်တဲ့ ...
ကွန်ပျူတာသမားတိုင်းအတွက် အသုံးဝင်တဲ့ Deep Freeze s...
ဆိုဒ်ကြီးတဲ့ ဖိုင်တွေကို ZIP ဖိုင်လေးနဲ့ အပိုင်းပိ...
♪ ထူးခြားသော ပင်ကိုစရိုက်များ ပါဝင်သည့် LG AKA စမတ...
♪ အရည်အသွေးမြင့် ဒီဇိုင်းနဲ့ နောက်ဆုံးပေါ် Mi Note ...
♪ Temple Run Brave v1.5.2 [Unlimited] Apk (28-Jan)...
♪ NetGuide Journal Vol (3), Issue (71) (28.1.14) ♫...
♪ ကွန်ပြူတာထဲမှာ မလိုအပ်တာတွေကိုရှင်းလင်းပေးမယ့် -...
Programmer တစ်​​ယောက်​ဖြစ်​ဖို့ ဒါ​တွေ​ယောသိပီးပီလ...
ZenFone5VS ZenFone6-Version 4.4.2အကုန်လုံးကို ...
FastStone Capture 8.0 Final with Keygen 100%
CCleaner 5.02.5101 Business Professional Technicia...
Automatic Call Recorder Pro v4.10 + Patched
Lazy Swipe v1.57
Screen Recorder v3.0
♪ Telenor ၏ အင်တာနက်ဆက်ကြောင်း ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်း ခ...
HyperSnap v8.04.03 (x86/ x64) + Portable + Keygen
GoldWave v6.10 + Final + Keygen
Windows 10 Technical Preview ISO Pro Edition & Ent...
ရိုးရှင်းပြီး ကွန်ပျူတာကို အကောင်းဆုံး သန့်ရှင်ပေး...
နောက်ဆုံးထွက်-Internet Download Manager (IDM) 6.21...
♪ ပင်လယ်ရေအောက်ကမ္ဘာမှ ငါးအလှလေးများ - Aquarium 3D ...
Windows 10 Technical Preview Pro Edition & Enterpr...
♪ Android သုံးစွဲသူများအတွက် လုံခြုံရေးအန္တရာယ် ♫
♪ MWC မှာ ပွဲထွက်လာဖို့ Galaxy S6 အတည်ပြုလိုက် ♫
♪ သီချင်းနားထောင်သူများအတွက် Player အသစ်လေး - n7pl...
Opera Beta 27.0.1689.44 Setup.exe
♪ Trojan Killer v2.2.6.2 (x86x64) + Full Crack ♫
♪ Samsung က Galaxy A7 စမတ်ဖုန်းကို ကြေညာ ♫
♪ Microsoft က Lumia 532 ၀င်းဒိုးဖုန်းကို ကြေညာ ♫
♪ Candy Crush Soda Saga v1.34.27 Mod (Unlimited Li...
♪ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပြီးလူကြိုက်များတဲ့ - Clash o...
My Point Wallpaper.Apk
ကဲမိတ်ဆွေ.. သင်တို့ကော ဒါတွေသိပြီးပြီလား ..For ရမ်...
♪ ဘားကမ့်ရန်ကုန်အွန်လိုင်းမှတ်ပုံတင်ခြင်း ပြန်လည်ခ...
♪ အင်တာနက်မြန်နှုန်းမြှင့်နိုင်ရန် တယ်လီနောနှင့် ထု...
♪ MECTEL ဖုန်းများ မက်ဆေ့ခ်ျပေးပို့ပြီး အင်တာနက်အခ...
♪ Vivo ရဲ့ X-Series စမတ်ဖုန်းစာရင်းဝင် - VIVO X5 M...
♪ Techspace Journal Vol (3), Issue (43) (27.1.15) ...
♪ ပုံတစ်ပုံကို အထူးပြုလုပ်ချက် Color Effect တွေထည်...
♪ ဖိုင်တင်ချတဲ့ Game ကစားချင်သူများအတွက် - Street ...
♪ ဆာဗာချို့ယွင်းချက်ကြောင့် ဝန်ဆောင်မှုများ ယာယီရပ်...
♪ ၁ ဘီလီယံမြောက် iOS ထုတ်ကုန်ကို နိုဝင်ဘာလတွင် App...
♪အကြမ်းခံပြီး အရည်သွေးမြင့်မားသော Samsung Galaxy A...
♪ ASUS Zenfone5ရဲ့အားသာချက် ၊ အားနည်းချက် ၊ နည်း...
♪ သုံးမိနစ်အတွင်း Mi Note စမတ်ဖုန်း အားလုံးကို Xia...
♪ Samsung က Tizen မောင်းနှင်လည်ပတ်စနစ် အခြေပြု Z1 ...
♪ Advanced SystemCare Ultimate v7.1.0.625 Final + ...
♪ Data သုံးစွဲမှုလျှော့ချပေးပြီး ပေါ့ပါးမြန်ဆန်တဲ့ ...
Undeleter for Root Users v3.3.3.1.B50
မြန်မာ၊ အင်္ဂလိပ် ၊ ထိုင်း ၊ ဂျပန် ၊ ကိုးရီးယား ၊ရုရ...
Windows 8 နဲ့ Windows Server 2012 မှာ Net Framewor...
Window OS 32 bit နဲ့ 64 bit ရဲ့ ကွာခြားချက် ကောင်း...
နာမည်ကြီး Antivirusဖြစ်တဲ့SUPERAntiSpyware Pro v...
Launcherအလန်းလေးမှသုံးချင်းသူများအတွက် Launcher 8 ...
Paper Sea Live Wallpaper Free v1.10
Desktop Hunter v1.0 + Portable
Microsoft Toolkit 2.5.3 Stable + Final (48Mb)
♪ လိုင်းဆွဲအား ပိုကောင်းစေမည့် အိုင်ဖုန်းကာဗာ ♫
♪ Internet Download Manager v6.21 Build 19 + Patch...
♪ Desktop web browser များမှ message ပေးပို့နိုင်မ...
♪ NEC Desktop PC Set ♫
ကွန်ပျူ တာမှာ လိုင်စင်မလို ဒေါင်းလုတ်အမြန်ဆွဲနိုင်...
ကွန်ပျူ တာကို ဗိုင်းရပ် ရန်ကကာကွယ်ပေးမဲ့ 360 Total...
အသုံးဝင်တဲ့ PDFCreator 2.0.2 ( PC version)
ကွန်းပျု တာတွေမှာမရှိမဖြစ် Adobe Flash Player 16....
♪ Oppo က R1C စမတ်ဖုန်းကို ကြေညာ ♫
♪ Xiaomi က Mi Note နှင့် Mi Note Pro စမတ်ဖုန်းနှစ်...
♪ Google က Ara Modular Phone များကို ပွာတိုရီကိုနု...
My Photos Live Wallpaper.Apk